Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Guam » Guam tsy misy mpizahatany Koreana no tantara ankehitriny
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Guam • Vaovao • Tourism • Fitaterana
Androany, Guam dia niarahaba ireo mpitsidika niverina tamin'ny sidina Koreana Air vao maraina, nanamarika ny dia an-dàlana niverina.
The Birao mpitsidika an'i Guam (GVB) sy ny sampandraharahan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena AB Won Pat International (GIAA) dia niarahaba ny sidina voalohany niverina avy tany Korea Air tamin'ny marainan'ny maraina.
Tonga avy tany Incheon ny fiaramanidina B777-300 niaraka tamin'ny mpandeha 82 tao anatiny.
Nanomboka serivisy isan-kerinandro tany Guam indray ny Korean Air hatramin'ny nanombohan'ny aretin'ny COVID-19.
“Faly izahay mandray an-tanan-droa ny Korean Air ary misaotra azy ireo noho izy ireo nanolo-tena tany Guam indray. Na dia fanamby ho an'ny rehetra aza ity taona sy tapany lasa ity, mahafinaritra ny mahita ny hazavana any amin'ny faran'ny tionelina izay lasa mamirapiratra, "hoy ny Dr. Gerry Perez, filoha lefitry ny GVB. “Manantena ny hiara-hiasa bebe kokoa amin'ireo orinasam-pitaterana an'habakabaka sy mpivarotra izahay mba hamelombelona ny indostrian'ny fizahan-tany Guam.”
Nanohy ny serivisy fitaterana an'habakabaka mahazatra ihany koa i T'way tamin'ny 31 Jolay ary nitondra mpandeha 52 tany Guam. Nanampy ny serivisy an'habakabaka hatramin'ny indroa isan-kerinandro ny Jin Air, izay manomboka anio amin'ny 2:42 hariva Jin Air no hany mpitaterana monina Koreana izay nanana serivisy fitaterana an'habakabaka nandritra ny areti-mandringana.
Ny GVB dia manohy miarahaba ny fahatongavana amin'ny fandraisana ireo sidina rehetra miverina. Ireo sidina mitambatra dia antenaina hanomezana toerana 3,754 XNUMX any Guam hatramin'ny faran'ny volana aogositra.
Vao 4 andro lasa izay Nanomboka ny serivisy teo anelanelan'i Korea sy Guam i Tway.